China Ugboro abụọ aro inggwakọta Extruder emepụta na suppliers | Onye na-eme brik
Igwe igwekota a bụ 132 / 185KW, nke nwere njide pneumatic, okpukpu abụọ na-agwakọta mmepụta site na ngwa ngwa pụrụ iche siri ike nke ezé nwere ọsọ ọsọ.
A na-agbaba osisi abụọ na-akpali akpali site na njikọta, a na-etinyekwa mma na-akpali akpali na mkpanaka ahụ. Mgbe ị na-arụ ọrụ, ihe abụọ ahụ na-akpali akpali na-atụgharị n'ime. Mgbe akụrụngwa na-abanye na mmiri na-akpali akpali, ọ na-egbutu ya site na mma na-akpali akpali nke arụnyere na ogwe osisi ahụ, pịgharịa, kpalite, ebugharị, mee ka ihe ndị ahụ gwakọta ma gwọọ ya.
Ọrụ Ngwaọrụ agwakọta ma na-apụ apụ
Workingkpụrụ ọrụ Gbara mmiri, ịgwakọta na ịgbanye
Ọrụ na Commissionrụ ọrụ
a) Tupu ị na-anya ụgbọ ala, lelee ngagharị nke usoro nnyefe ọ bụla na ịkwụnye njikọ ahụ, ogo na-agbanwe agbanwe nke teepu triangle.
b) Lelee akụkụ niile na-agagharị na nkwonkwo maka ụcha mmanụ tupu ịmịnye mmanụ mmanu. Maka igbe na nnyefe igbe, Jiri L-CKD220 # mmanụ na-ete mmanụ mgbe ọnọdụ ihu igwe dị n'etiti -10 na 20 ogo, na L-CKD320 # nnukwu ibu mechiri mmanụ gia mgbe ọnọdụ ihu igwe dị n'agbata ogo 10-45.
c) Lelee nrụgide ikuku nke mgbapụta ikuku, dozie ikuku ikuku na 0.6 ~ 0.9 MPa, lelee ọnọdụ ọrụ nke njide pneumatic.
d) Lelee ma ọrụ ahụ ọ dị mma, ma enwere ụda na-adịghị mma na ịma jijiji, ma enwere mkpuchi na ihe ndị ọzọ.
e) Lelee ma ipigide na-arụ were were, iche kpamkpam na-arụ ọrụ flexibly.
f) Gbaa mbọ hụ na ihu igwe niile na-ebilite nke ọ bụla na-erughị 35 Celsius.
g) Lelee ma dozie nkuku ntụgharị nke onye na-emegharị ihe, dịka ọnọdụ nke akụrụngwa si dị, ihe achọrọ ka ọ pụta, a ga-emegharị ntụgharị ntụgharị nke ntụgharị n'etiti 12 Celsius na 25 Celsius.
Nke gara aga: KAWASAKI Robot Brick Stacking